तपाईको (बिहिबार, साउन २१ को राशीफल) -
तपाईको (बिहिबार, साउन २१ को राशीफल)
२०७८, २१ श्रावण बिहीबार ०३:४३ August 5, 2021 clickonLeaveaComment on तपाईको (बिहिबार, साउन २१ को राशीफल)
तपाईं हालैमा निराशा महसुस गरिरहनुभएको छ भने – तपाईंले आज गरेका सही कार्यहरू र विचारहरूले धेरै आवश्यक राहत ल्याउनेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर खर्चमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई बचाउन गाह्रो पर्नेछ। छोराछोरीका चासाको चिन्ता गर्नु आवश्यक हुनेछ। प्रेममा भएको निराशाले तपाईंलाई निरुत्साहित गर्ने छैन। काममा आज कुराहरू तपाईंको पक्षमा हुनेछन्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको कुरा आफ्नो नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। साँझमा चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र राम्रो मुडमा राख्न सक्छ। प्रेमयुक्त जीवनले आशा ल्याउँछ। काम गर्ने आफ्नो वरिष्ठ आज स्वर्गदूतहरूको अभिनय गरेको जस्तो देखिन्छ। यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।
बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। तपाईं आफ्नो समूह भित्र घुम्नुभयो भने विशेष कसैको आँखा फेला पार्नु हुनेछ। आफ्नो मालिकले यसको टिप्पणी लिनु अघि रोकिएको काम पूरा गर्नुहोस्। यो तपाईंका जीवनसाथीसँग रोमान्स गर्ने राम्रो दिन हो।
बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। तपाईंले बचत हुने लगानीमा लगानी गर्नुभयो भने राम्रो पैसा कमाउनु हुनेछ। साथी तथा आफन्तहरूसँग मजा गर्नुहोस्। आज कार्डमा मित्रता हराउने सम्भावना उँचो छ र होशियार हुनुहोस्। काममा तपाईं सहकार्यकर्ताहरूले पनि गतिशील र प्रगतिशील परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नेछन्। तपाईंले पनि तेज कार्य गर्न आफैलाई आधार दिनु आवश्यक छ। सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न अधिनस्थहरूलाई प्रेरणा दिनाले सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य केही खराब हुन सक्छ।
केही बिघ्नहरूको सामना गर्नु पर्न सक्छ। मन नमार्नुहोस् तर चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न कठिन काम गर्नुहोस्। यी बिघ्न बाधाहरूले अझै उत्थान गराउन सकुन। आफन्तहरूले पनि संकटको समयमा मद्दत गर्नेछन्। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। तपाईंको प्रेममा अनुमोदन नहुन सक्छ। आफूलाई धोखाबाट सुरक्षित राख्नको लागि व्यापारमा चनाखो हुनुहोस्। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्; अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। तपाईंका प्रियले तपाईंलाई खुसी राख्ने कुराहरू गर्नेछन्। यात्राले तत्काल परिणाम ल्याउने छैन तर भविष्यमा लाभको लागि राम्रो जग बसाउनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
आफ्नो दीर्घ रोग निको पार्न मुस्कान चिकित्साको प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यो सबै समस्याको लागि उत्तम विषनाशक औषघि हो। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तपाईंसँग बस्ने कोही तपाईंको आकस्मिक र अप्रत्याशित व्यवहारसँग निराश र दुखी हुन सक्छन्। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। साझेदारी परियोजनाहरूले सकारात्मक परिणाम दिनु भन्दा बढी समस्याको सिर्जना गर्नेछन् – तपाईं विशेष गरी कसैले तपाईंसँग फाइदा उठाउनको लागि आफैंले अनुमति दिएकोमा आफैमाथि रिसाउनु हुनेछ। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। नयाँ सम्बन्ध दीर्घकालिन र अत्यधिक लाभदायक हुनेछ। प्रेम महसुस गर्ने र आफ्नो प्रियसँग बाँट्ने भावना हो। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। आज तपाईंले र तपाईंको जोडीले आफ्नो वैवाहिक जीवनको उत्तम स्मृति सिर्जना गर्नु हुनेछ।
तपाईंको यो आध्यात्मिकताको मद्दत लिने उचित समय छ किनकि मानसिक तनाउलाई प्रतिआक्रमण गर्ने सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। ध्यान र योगले तपाईंको मानसिक दृढता बृद्धि हुनेछ। तपाईंले समयमा गरेको मद्दतले कसैको जीवन बचाउन सक्छ। समाचारले तपाईँको परिवारका सदस्यहरूलाई गर्व हुने र तिनीहरूलाई प्रेरित पनि गर्नेछ। आफ्नो प्रेमीसँग बाहिर जाने हुँदा आफ्नो उपस्थिति र व्यवहार स्वाभाविक राख्नुहोस्। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। बाहिरी मान्छेको हस्तक्षेपले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा रोकावट प्रदान गर्नेछ।
सबैले भनेको सुन्नुहोस्, तपाईंका समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। तपाईंमाथि आज नराम्रो भावना राख्नेहरूले पनि कुरा सपार्न खोज्छन् र तपाईंलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गर्नेछन्। व्यक्तिगत मामिलाहरू नियन्त्रणमा हुनेछन्। आफ्नो बौद्धिक शक्तिको प्रयोग आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुहोस्। यसले व्यावसायिक परियोजनाहरू पूरा गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ र नयाँ विचार दिनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंको पीडा क्षण मै निकाल्न सक्छन्।
तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। वित्तमा निश्चित बढोत्तरी हुनेछ – तर त्यही समयमा व्ययमा पनि वृद्धि हुनेछ। आफ्नो राय छोराछोरीलाई जबरजस्ती थोप्नाले तिनीहरूलाई परेशान गराउन सक्छ। तिनीहरूलाई बुझाउनु राम्रो छ, जसले गर्दा तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकून्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको परमानन्द प्रेम भएका दुई बीच रहन्छ। हो, तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ। कामको कुरा राम्रो देखिन्छ। तपाईंको मुड दिनैभरि राम्रो रहनेछ। आज बिहान तपाईंलाई केही प्राप्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंको आफ्नो सम्पूर्ण दिन रमाइलो हुनेछ।
आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ। घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ – तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो प्रेमको लागि तपाईंको भाग्यशाली दिन हो। तपाईंको प्रेमीले तपाईंको लामो प्रतीक्षा गरेका कल्पनाको बोध गराउनेछन्। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
आज बुधबार सम्म नेपालमा कुन-कुन प्रदेशमा कतीले कोभिड १९ बिरुद्धको खोप लगाए?
जापान सरकारले उपलब्ध गराउने १६ लाख मात्रा खोपमध्येको पहिलो खेप आगामी शनिबार र दोस्रो खेप आइतबार नेपाल ल्याइने
तपाई को (सोमबार २०७६ फागुन ५) को राशीफल
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार ०१:२९ February 17, 2020 clickon
तपाईंको आजको राशीफल (आईतबार २०७६ असोज १२ ) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, १२ आश्विन आईतवार ०३:२५ September 29, 2019 clickon
तपाईको (शुक्रबार मंसिर १२) को राशीफल
२०७७, १२ मंसिर शुक्रबार ०१:५७ November 27, 2020 clickon